Iindaba-Ibhokisi yezixhobo zeAluminiyam
IAluminiyam ingxubevange yebhokisi yezixhobo yenye yeemveliso zebhokisi yealuminiyam. Luhlobo lwebhokisi olwenziwe ngezinto zealuminium alloy ukufikelela kwisicelo sokubeka izixhobo kunye nezixhobo zokulinganisa. Yahlukile kwezinye iibhokisi zezixhobo, le bhokisi yezixhobo inealuminiyamu ingxubevange. Iimpawu zezinto eziphathekayo zinobunzima obulula, kulula ukuqhubekeka, kwaye zinezibonelelo ezingenakuthelekiswa nanto ngaphezulu kwezinye izinto ngokwamandla.
Iimeko zeAluminiyam, iibhokisi zezixhobo zealuminium, iibhokisi zeplastikhi yealuminium, iibhokisi zonyango, iibhokisi zokubonisa kunye nezinye iibhokisi zokupakisha iimveliso zealuminium, iimveliso zeYuhang Chassis Factory zibandakanya: iimeko zokuthambisa, amatyala ezacholo, amatyala e-CD, iimeko ze-chip, ibhokisi yephasiwedi yoXwebhu, ibhokisi yesalon yobuhle , ibhokisi yokhathalelo lwezonyango, ibhokisi yezixhobo ezichanekileyo, ibhokisi yeelaptop, ibhokisi yewotshi, ibhokisi yezixhobo, ibhokisi yezixhobo, ibhokisi yezixhobo, ibhokisi yokuxhasa ukusebenza, ibhokisi yezixhobo zomculo, ibhokisi yeklabhu yebhilidi, ibhokisi yesuti yegalufa, ibhokisi yemali ebhankini, ibhokisi yemali, ibhokisi yebhaybheyi , ibhokisi yewayini, ibhokisi yezixhobo zokuloba, ibhokisi yesipho, ibhokisi ye-acrylic, ii-liners ezahlukeneyo zokukhusela, njl.
Umzimba ophambili wemveliso wenziwe ngeeprofayili zealuminium esemgangathweni, ezineempawu zoyilo olufanelekileyo, ulwakhiwo olomeleleyo nembonakalo entle. Isetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo, iimitha, i-elektroniki, unxibelelwano, oomatshini bokuzenzekelayo, ii-sensors, amakhadi smart, ulawulo lweshishini, oomatshini bokuchaneka kunye namanye amashishini. Isixhobo esikwizinga eliphezulu iKhabhinethi efanelekileyo.
Ibhokisi yeAluminiyam [ibhokisi yesixhobo sealuminium] ibhokisi yentsimbi
(1) Khetha ucingo welding
Ngokubanzi khetha i-301 ye-aluminium ye-welding wire kunye ne-311 ye-aluminium ye-welding wire.
(2) Khetha indlela ye-welding kunye neeparameter
Ngokubanzi kwenziwa ngendlela yewelding yasekhohlo, kwaye itotshi yokuwelda kunye nomsebenzi zenza i-angle ye-60 °. Xa ubukhulu be-welding bungaphezulu kwe-15mm, kusetyenziswa indlela efanelekileyo ye-welding, kwaye itotshi ye-welding kunye ne-workpiece zenza i-angle ye-90 °.
(3) Amalungiselelo phambi iwelding
Sebenzisa iindlela zamachiza okanye ezomatshini zokucoca ngokungqongqo ifilimu ye-oxide yomhlaba kumacala omabini e-weld groove.
Ukucoca oomatshini kunokusebenzisa izixhobo zokusika umoya, izixhobo zokugaya, iifayile kunye nezinye izixhobo. Kwiifilimu ezincinci ze-oxide, iibrashi zentsimbi ye-0.25mm zinokusetyenziselwa ukususa iifilimu ze-oxide.
I-Welding yenziwa kwangoko emva kokucoca. Ukuba ixesha lokugcina lidlula iiyure ezi-4, kufuneka licocwe kwakhona.
(4) Iimpawu zealuminium kunye nezinto ezenziwe ngealuminium kwiibhokisi zealuminium
I-Aluminium sisinyithi esimhlophe esimhlophe nesinyithi esineplastikhi elungileyo, ukuqhuba okuphezulu kombane kunye nokufudumeza kobushushu, kwaye ikwanakho ukumelana neoksijini kunye nokubola. I-Aluminium yenziwe i-oxidized ngokulula ukuvelisa ifilimu ye-aluminium oxide, ekulula ukuvelisa inclusions kwi-weld, ngaloo ndlela itshabalalisa ukuqhubeka kunye nokufana kwesinyithi, ukunciphisa iipropathi zayo zoomatshini kunye nokumelana nomhlwa.
(5) Ubunzima kwi-welding aluminium kunye nezinto zealuminium kwiibhokisi zealuminium
Kulula kakhulu ukwenza i-oxidize. Emoyeni, i-aluminium idityaniswa ngokulula kunye ne-oxidation ukwenza ifilimu eshinyeneyo ye-aluminium oxide (ubukhulu malunga ne-0.1-0.2 μm), enendawo yokunyibilika ephezulu (malunga ne-2050 ° C), egqitha kakhulu indawo yokunyibilika kwealuminium kunye nealuminium alloys ( malunga ne-600 ℃). Ubuninzi bealuminium oxide yi-3.95-4.10g / cm3, emalunga nama-1.4 amaxesha e-aluminium. Umphezulu wealuminium oxide wefilimu kulula ukufunxa ukufuma. Xa i-welding, ithintela ukudityaniswa kwesinyithi esisisiseko, kwaye kulula ukwenza ii-pores, i-slag, kunye neZiphene ezinje ngokungabikho kwe-fusion, okubangela ukuthotywa komsebenzi we-weld.
I-aluminium ingxubevange yenziwe nge-aluminium emsulwa ngokudibanisa izinto ezithile ezinje ngealuminium-ithusi, ialuminiyam-zinc-wemagniziyam-ubhedu ialuminium enkulu. I-Aluminium alloy ineempawu zobunzima bokukhanya, ixabiso eliphantsi, iipropathi zoomatshini (amandla afanayo), kunye nealuminium alloy kulula ukuyicwangcisa kwaye inezinga eliphezulu lokusasaza ubushushu. Ingakumbi injini inxenye yesithuthi ilungele ngokukodwa ukusetyenziswa kwezinto zealuminium alloy. Ngokubhekisele kwiimeko ezininzi zekhompyuter, kusetyenziswa ii-aluminium-alloys alloys. Ngokukodwa jonga ukusasaza kobushushu. Kungenxa yokuba ubhedu kunye nealuminium zixutywe kwaye zigqityiwe, ukusebenza kobushushu kulungile, kwaye nditsho nesiphelo esiphezulu sabalandeli sokupholisa amanzi se-CPU sisebenzisa le nto. Uhlobo lwebhokisi yomzimba usebenzisa ialuminium alloy izinto ezikhutshiweyo kunye nezinto ezinxulumene noko. Eyahlukileyo kwezinye iibhokisi zeprofayile, le bhokisi yealuminium ineempawu zezinto zealuminiyam, ubunzima bokukhanya, ukuqhubekeka ngokulula, amandla omthwalo wokuthwala umthwalo, inkangeleko entle, kunye nolwakhiwo olufanelekileyo. Ngenxa yeempawu ezizodwa zebhokisi yeprofayili ye-aluminium kunye nomxholo ophezulu kunye nobuchwepheshe obuphezulu, idlala indima engcono ekukhuseleni imveliso ngokubhekiselele ekuthuthweni nasekusebenziseni ngokufanelekileyo, kwaye ibhokisi efanelekileyo kwiimveliso ezahlukeneyo eziphezulu.